चीन पीतल बल निर्माता र आपूर्तिकर्ता | लिक्सिन
हामी तामा र पीतल बलहरु उत्पादन मा अनुभव को धेरै बर्ष छ।
पीतल बलहरु पानी द्वारा जंग को लागी उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान गर्दछ, र ती अन्य जंग प्रतिरोधी बलहरु को तुलना मा लागत मा काफी कम छन्। पीतल बलहरु बारम्बार भल्भ अनुप्रयोगहरु को सानो आकार को बल को आवश्यकता को धेरै प्रकार मा प्रयोग गरीन्छ।
लगभग शुद्ध तांबे गेंदहरु मुख्य रूप गैल्वानिक अनुप्रयोगहरु र इलेक्ट्रोनिक उद्योग को क्षेत्र मा प्रयोग गरीन्छ। तामाको बल नरम छ त्यसैले यो ड्रिल गर्न को लागी सजिलो छ, तब सामान्यतया भल्भ, ईन्धन injectors, स्प्रेयर, दबाव गेज, पानी मिटर, प्रसारण प्रणाली, गहना, कंगन, झुम्का, हार, टच स्पट र कला बर्तन मा प्रयोग गरीन्छ।
पीतल बल पिउने पानी, खारे पानी, समुद्री पानी (उच्च प्रवाह दर बाहेक), नुन वातावरण, पेट्रोलियम उत्पादनहरु, रक्सी मा राम्रो जंग प्रतिरोध। एसिड र क्षार को सम्मान संग निष्पक्ष प्रतिरोध। यो hydroxides, cyanides, oxidizing एसिड संग सम्पर्क मा प्रतिरोध गर्दैन। एक सामान्य नियम को रूप मा, जस्ता सामग्री बृद्धि को रूप मा जंग प्रतिरोध घट्छ।
तामाको बल समुद्री र औद्योगिक वातावरण, भाप, क्षार, तटस्थ खारा समाधान मा राम्रो जंग प्रतिरोध। तिनीहरू अक्सीकरण एसिड, हलोजन, सल्फाइड, अमोनिया, समुद्री पानी संग सम्पर्क मा प्रतिरोध गर्दैनन्।
पीतल बल र कपर बल को प्याकेजि Met्ग तरिका
१. सीलबंद झोला र साना डिब्बा, जो नमूना पठाउन को लागी उपयुक्त छन् को दुई तहहरु को उपयोग गर्नुहोस्। तौल १० किलो भन्दा कम छ।
2. चार साना डिब्बाहरु र सीलबंद झोलाहरु संग डिब्बा मा प्याक, १० किलो र २५ किलो को बीच मा तौल।
३. बुना झोलाहरु मा प्याक, बुना झोला को दुई तहहरु र सीलबंद झोलाहरु को दुई तहहरु, २५ किलो र ४० केजी को बीच मा बनेको।
4. प्लास्टिक खोल प्रयोग गर्नुहोस्, प्रत्येक कार्ड स्लट मा १ बल, टकराव बाट बच्न। यो उच्च पोलिश बल र ठूलो आकार बल को लागी उपयुक्त छ।
5. हामी तपाइँको अनुरोध अनुसार बलहरु प्याक गर्न सक्छौं।
हामी एक २४ घण्टा अनलाइन सेवा स्टाफ छ, यदि तपाइँ बलहरु को जरूरत छ, कृपया हाम्रो सेवा स्टाफ लाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
हामी स्टक को एक धेरै छ र 1-2 दिन मा यो जहाज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यहाँ कुनै इस्पात बल तपाइँलाई आवश्यक छ, हामी यसलाई 5-7 दिन भित्र पठाउनेछौं।
हामी निर्माता हौं, निर्यात गर्ने अधिकार छ, तपाइँलाई सबैभन्दा कम मूल्य र सबै भन्दा राम्रो गुणस्तर दिन सक्नुहुन्छ, र हामी धेरै देशहरु को मुद्रा स्वीकार गर्न सक्छौं।
अघिल्लो: एल्युमिनियम बल
अर्को: तामाको बल
6.35mm 1/4 पीतल बल G200
9.525mm 3/8 पीतल बल G200
H62 पीतल बल
H65 पीतल बल
H70 पीतल बल
ठोस पीतल बल
शुद्ध ठोस कपर बल, पीतल बल, H62 पीतल बल, सानो कपर बलहरु, पीतल बल जाँच वाल्व, H65 पीतल बल,